10 Ihe ọcoụcoụ na -aba n'anya na -a Toụ iji nwalee n'ụwa niile | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ihe ọcoụcoụ na -aba n'anya na -a Toụ iji nwalee n'ụwa niile
Ezi ntụziaka nzuzo, na-atọ ụtọ, na onye a alcoụrụma nke ukwuu, ụwa Ogwe kacha mma na klọb na -eje ozi ndị a 10 kwesịrị ịnwale ihe ọ alcoholụ alcoholụ na-aba n'anya. Site na China ruo Europe, ụfọdụ nke 10 ihe ọ alcoholụ alcoholụ na -aba n'anya iji nwalee n'ụwa niile dị narị afọ ole na ole. Otú o sina dị, ha na -ewu ewu nke ukwuu, na ijide ihe ọ drinkụ orụ ma ọ bụ 2, na ezumike gị bụ ahụmịhe agaghị echefu.
1. Ihe ọcoụcoụ na -aba n'anya na -a Toụ iji nwalee n'ụwa niile: Aperol Spritz Italy
Mmanya dabeere na mmanya, Aperol Spritz na -atọ ụtọ na ihe ndị na -eme ya ga -eme ka ndụmọdụ dị mma tupu isi ọmụmụ abịarute. Spritz bụ aperitif ama ama ama ama na Northern Italy, nke mbụ sitere na Venice. Spritz bụ ngwakọta nke Campari, prosecco, na mmiri soda, na ice, n'ihi ya, ọ dị mma maka ịchafụ elu obodo ezumike ezumike gị.
O yikarịrị ka ị ga-ahụ ihe ọ drinkụ -ụ na-acha ọbara ọbara na iko mmanya dị elu, n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tebụl nri ọ bụla na Italy. Aperol spritz na -enye ume ọhụrụ ma zuo oke maka oge ọkọchị na -ekpo ọkụ na Mediterenian, yabụ ị ga -anwale mmanya a na -egbu egbu mgbe ị na -eri nri na Italy.
Mgbe amachibidoro ya iwu maka 100 afọ na France, Green Fairy na -enweta ewu ewu ọzọ. Ihe ọ drinkụ alcoụ a na -egbu egbu na -amasịkarị n'etiti ndị edemede na ndị na -ese ihe na Paris 19-20nke na narị afọ, kachasị na Montmartre. Absinthe bụ otu n'ime 10 mmanya na -egbu egbu siri ike ịnwale n'ụwa niile.
taa, ị nwere ike nweta absinthe, mana ọ bụ naanị mgbọ ebe ọ bụ na mmanya a siri ezigbo ike, n'ọtụtụ ụlọ mmanya na Paris. La Ụgwọ Verte, Lulu White, L'Absinthe Cafe, bụ ole na ole n'ime ebe kacha mma ị nwere ike nwalee mmanya kacha egbu egbu n'ụwa. Otú ọ dị, ihe ndị bụ isi ị ga -atọ ụtọ n'ụdị absinthe niile bụ anise, wormwood okooko osisi, na fennel dị ụtọ.
3. Sangria nke Spain
Eleghị anya ị maghị na "Sangria" sitere n'okwu "Sangre", ọbara, n'asụsụ Spanish. Onweghị ihe ga -echegbu onwe gị gbasara ihe ọ drinkụ drinkụ mmanya a, aha a pụrụ iche na -ezo aka naanị na -acha ọbara ọbara siri ike. Ọ nweghị ihe dị mma karịa iko Sangria n'ehihie ya na nri Paella.
Ndị Rom bụ ndị mbụ mepụtara Sangria site na mkpụrụ vaịn n'oge emepechabeghị emepe. Ihe ọverageụ graụ mkpụrụ vaịn ghọrọ mmanya na -egbu egbu ama ama mgbe obere mmanya gasịrị iji mee ka nje ghara ịdị. Emere sangria ọdịnala site na mkpụrụ vaịn Tempranillo, toro na mpaghara Rioja, Spain. Otú ọ dị, ị nwere ike ịnwale ihe ọ alcoụ alcoụ a na -egbu egbu n'ebe niile na Spain na Portugal.
Ebe ole na ole akwadoro yana Sangria kacha mma na Barcelona: cava na uhie Sangria na Arcano, anyụ na Sangria na Tiketi.
4. Gin nke England
Gin mbụ rutere Britain site na Holland na narị afọ nke 18. Ihe kpatara ya bụ Gin sitere na mkpụrụ osisi ọhịa, ya mere Gin bụ ihe ọ berriesụ berriesụ sitere na mkpụrụ osisi agwakọtara na soda, mmiri, na mgbe ụfọdụ na -atọ ụtọ. Gin bụ ihe ọ drinkụ firstụ mbụ nke kpọkọtara ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke n'ụlọ mmanya n'ofe England. Ihe kpatara ya bụ oke mmanya, na -eme ka ihe mgbochi niile kwụsị.
taa, A na -agwakọta Gin na ngwa nri dị iche iche: mint, Mpekere lemon e ghere eghe, peppercorns, na kemmiri ọbara ọbara-oroma. Ebe ọ bụ na Gin bụ onye a alcoụrụma nke ukwuu, ị ga -egbu mmanya ngwa ngwa karịa ọsọ ọkụ. N'ihi ya, ọ na -adị mma mgbe niile ịga ụlọ mmanya n'otu. N'ụzọ dị otu a, echekwara gị na otu nnukwu njem nlegharị anya iji zere n'ụwa niile, dị ka obodo nwere enyi na enyi.
Akara mmanya Czech Republic bụ biya. Beer dị ọnụ ala karịa mmiri na Czechia, ọ bụghịkwa ọtụtụ maara na mmanya a na-aghaghị ịnwale bụ Becherovska. Nke ahụ dị mma, ihe ọ drinkụ drinkụ Becherovska na -egbu egbu kacha ewu ewu n'oge oyi. Ihe ọ drinkụ Thisụ a nwere ihe karịrị 20 ụdị ahịhịa, Cinnamon nụrụ ụtọ, weere ya na ube ma ọ bụ ihe ọineaụ juiceụ painiapulu. Nke a bụ n'ihi ekpomeekpo ọgwụ siri ike, na n'ezie ihe 38% mmanya.
Ebe kachasị mma ịnwale Becherovska bụ na Ogwe Becher. A na -akpọ ụlọ mmanya a dị jụụ aha Josef Vitus Becher, onye gbanwere mmanya ahụ ka ọ bụrụ ọgwụ nri, n'ime mmanya na -egbu egbu ọ bụ taa, laghachi na 1807.
6. Pimm Cup nke United Kingdom
Ịga Wimbledon ma ọ bụ Chelsea Gosi ifuru kwa afọ na ezumike bekee gị? Eleghị anya ị ga -a drinkụ karịa 1 iko Pimm. Pimms bụ ihe ọ drinkụ summerụ kacha mma n'oge ọkọchị na ihe omume ọkọchị England, dị ụtọ, oyi, ma jiri mkpụrụ osisi jee ozi, zuru oke maka ụbọchị okpomọkụ.
Otú ọ dị, emehiela ihe ọ drinkụ drinkụ a na -amị mkpụrụ ka ọ bụrụ ntụmadị mara mma, n'ihi na o nwere n'ezie 25% mmanya. Na mgbakwunye, Pimms sitere na gin nke na-agbakwunye ọkwa mmanya ya, ya mere ị nwere ike ị gaghị amakwa etu 1-2 ihe ọ drinksụ drinksụ na -enye gị ihe karịrị nke ọma nnukwu ihe omume Britain n'oge ọkọchị.
7. Mmanya na -aba n'anya iji nwalee ụwa niile n'oge oyi: Gluhwein
Christmas time is one of the best times to travel na Europe, na Christmas ahịa bụ ihe ịtụnanya dị ịtụnanya. Gluhwein bụ mmanya na -atọ ụtọ nke ukwuu, ị nwere ike detụ ya ire na ahịa ekeresimesi na Germany, Austria, na Switzerland, naanị soro igwe mmadụ obi ụtọ.
N'adịghị ka mmanya na -acha ọbara ọbara, Gluhwein dị ụtọ, agwakọta na citrus, ngwa nri, na cinnamon. Na mgbakwunye, ị ga -azụrụ ya ọkụ, otu a ga -enye gị ezumike na -atọ ụtọ ma na -akasi obi site n'ịgagharị n'oge oyi oyi Europe. N'adịghị ka ihe ọ drinksụ -ụ ihu igwe oyi, Schnaps bụ ihe ọzọ dị mma maka ihe ọ alcoụ alcoụ mmanya na -egbu egbu iji nwaa mgbe ị nọ na Europe.
8. Mmanya na -aba n'anya Iji nwalee na China: Mmanya Maotai
A na -emepụta mmanya Maotai nke mba China na mpaghara Guizhou. Emepụtara Maotai mbụ na usoro ndị eze Ming na narị afọ nke 16. Nke a ga-anwale ihe ọ Chineseụ drinkụ ndị China na-egbu egbu bụ ọka emere na usoro nke na-ewe afọ ole na ole ruo mgbe ngwakọta a ka mmanya wee nwee ike iku ume nke ọma..
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na- na -eme njem na China, mgbe ahụ nwalee ihe ọ drinkụ Maụ a pụrụ iche nke Maotami. Ọ kacha mma ịtọ ya ụtọ 20-25 ogo okpomọkụ, na iko tulip pụrụ iche. Nke a ga-enye gị ohere ị nweta ụtọ ndị bara ọgaranya na itinye uche nke ihe ọ soyụ soyụ ndị China na-esi ísì ụtọ.
Ị nwere ike ịnụ ụtọ pomace a na -atọ ụtọ – Mkpụrụ vaịn brandi na -ewu ewu na Northern Italy, Switzerland, na San Marino. Mgbe ị na -a Apeụ Aperol na nri ehihie, grappa bụ ihe ọ drinkụ -ụ mgbe nri abalị gachara, iji nyere aka gbanye nnukwu pasta ma ọ bụ nri Pizza. Ya mere, n'adịghị ka mmanya kpochapụwo ị ga -a drinkụ na iko mmanya dị elu, grappa ga -abịa na obere iko nke 1-2 ounces.
Na mgbakwunye, ị nwere ike nwalee Grappa ọnụ yana obere espresso, ma ọ bụ ọbụna detụ ya agwakọta na mmanya, nke ọ bụla, ị ga -enwe mmasị ịnwale mmanya mmanya Italiantali a ma ama, na kwesịrị ịtinye ya na nri na ihe ọ drinksụ drinksụ ị ga-anwale na Italy.
10. Belgium Belgium
Ihe ọ liụ liụ kacha ochie na Europe, Jenever bụ mmalite Gin. Otú ọ dị, taa ihe ọ drinksụ twoụ abụọ a bụ mmanya na -aba n'anya abụọ. Mgbe ị nọ na Belgium ị nwere ike ịnwale agadi na nwata Genever, nwa okorobịa Gen dị ka aperitif, mgbe agadi Gen mgbe nri abalị ka nri nri.
Jenever bụ mmụọ nke Belgium karịa 500 afọ. Ọtụtụ na -aga Belgium na ebumnuche ị nụrụ ụtọ biya kacha mma nke ndị Belgium. Otú o sina dị, Jenever bụ mmanya na -egbu egbu na Belgium. Ọ bụrụ na -ịchọrọ iwere Belgium Jenever dị ka ihe ncheta, chọọ karama e ji ụrọ kpụọ, iko ihe ejiri aka mee na -echekwa mmanya a dị ịtụnanya.
ebe a na Save A Train, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi ezumike gị gburugburu ụwa. Ogwe kacha mma, pubs, na ntụpọ iji nwalee ihe ndị a 10 ihe ọholicụholicụ na -aba n'anya n'ụwa niile bụ njem ụgbọ oloko.
Ịchọrọ itinye ozi blọgụ anyị "Ihe ọ Alụ Alụ mmanya na -aba n'anya iri iji nwalee n'ụwa niile" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ọṅụṅụ Alcohol AlcoholDrinks AlcoholDrinksWorldwide PopularAlcoholDrinks